ဆင်လေးတွေကပေးတဲ့ ဘ၀သင်ခန်းစာများ… – Trend.com.mm
Posted on October 14, 2018 October 9, 2018 by Noel
ဆင်ဆိုတာ လူသားနဲ့အနီးစပ်ဆုံး အသိဥာဏ်အရှိဆုံးတိရစ္ဆာန်မျိုးနွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆင်တွေဆီကနေ လူသားတွေပြန်လည်သင်ယူနိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေဆိုတာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုသင်ခန်းစာတွေလဲ?
*ကိုယ်ချစ်ရတဲ့တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါ သူကကိုယ့်ကိုစွန့်လွှတ်မသွားမချင်း လက်ကိုဖမ်းဆုပ်ထားပါ
*တစ်ခါတစ်လေကိုယ့်ဆီက ပွေ့ဖက်နှစ်သိမ့်မှုကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့သူတွေရှိတတ်ပါတယ်။၀မ်းနည်းအားငယ်နေတဲ့သူအတွက် ဒီလိုပွေ့ဖက်မှုက အားအင်ဖြစ်စေမှာပါ။
*တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ့်အနားမှာအမြဲတမ်းရှိနေပေးမဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ချို့လိုအပ်ပါတယ်
*မိသားစုနဲ့အတူတူရှိတဲ့အချိန်ဟာ ဘယ်လိုအနှောင့်အယှက်မျိုးမဆို မရှိသင့်တဲ့ အရေးကြီးဆုံးတန်ဖိုးအရှိဆုံး အချိန်တစ်ခုပါ
*တစ်ခါတစ်လေ အချိန်ခဏပေးပြီးလမ်းထွက်လျှောက်လိုက်တာက သင်ခေါင်းရှုပ်နေတာတွေရှင်းဖို့လိုအပ်နေတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။
*ကိုယ့်ထက်အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေပြောတာကို နားထောင်ပြီးစဉ်းစားချင့်ချိန်တတ်ပါစေ။ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးလေ သူတို့က ကိုယ်တွေထက် များပြားလှတဲ့ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေ ကြုံတွေ့ပြီးပြီဖြစ်ဖို့ ဘယ်ဟာက မှန်တယ်၊မှားတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ထက်ပိုပြီးသိနိုင်ပါတယ်။
*ကိုယ့်ကိုတကယ်ချစ်ခင်သူတွေဟာ ကိုယ်ကျရှုံးတဲ့အချိန်တိုင်း၊ကိုယ်လဲကျတဲ့အချိန်တိုင်း အမြဲနောက်မှာရှိနေတယ်။
*ကိုယ်လိုချင်တဲ့အရာက ဟိုးအမြင့်ကြီးမှာရှိနေရင်တောင်ဆက်သွားပါ။ဆက်လျှောက်ပါ။အဆုံးသတ်မှာ သင့်ကိုယ်သင့်တောင် ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လား အံ့သြယူရပါလိမ့်မယ်။
*ဆင်တွေအတွက် ရေအသစ်ဆိုတာစမ်းသပ်ကြည့်ဖို့လိုသလို လူသားတွေအတွက်လည်းဘယ်လိုအသစ်အဆန်းမဆိုစမ်းသပ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။စမ်းသပ်ပြီးမှကောင်းတယ်ဆိုးတယ်သိမှာပါ။
ဒါတွေကတော့ ဆင်လေးတွေကိုကြည့်ပြီး ရရှိခဲ့တဲ့ဘ၀သင်ခန်းစာတွေပါပဲ။
ဆငျဆိုတာ လူသားနဲ့အနီးစပျဆုံး အသိဉာဏျအရှိဆုံးတိရစ်ဆာနျမြိုးနှယျဖွဈပါတယျ။ဒီဆငျတှဆေီကနေ လူသားတှပွေနျလညျသငျယူနိုငျတဲ့သငျခနျးစာတှဆေိုတာလညျးရှိနပေါတယျ။ဘယျလိုသငျခနျးစာတှလေဲ?
*ကိုယျခဈြရတဲ့တဈစုံတဈယောကျကိုတှတေဲ့အခါ သူကကိုယျ့ကိုစှနျ့လှတျမသှားမခငျြး လကျကိုဖမျးဆုပျထားပါ
*တဈခါတဈလကေိုယျ့ဆီက ပှဖေ့ကျနှဈသိမျ့မှုကိုစောငျ့မြှျောနတေဲ့သူတှရှေိတတျပါတယျ။ဝမျးနညျးအားငယျနတေဲ့သူအတှကျ ဒီလိုပှဖေ့ကျမှုက အားအငျဖွဈစမှောပါ။
*တဈခါတဈရံ ကိုယျ့အနားမှာအမွဲတမျးရှိနပေေးမဲ့ သူငယျခငျြးကောငျးတဈခြို့လိုအပျပါတယျ
*မိသားစုနဲ့အတူတူရှိတဲ့အခြိနျဟာ ဘယျလိုအနှောငျ့အယှကျမြိုးမဆို မရှိသငျ့တဲ့ အရေးကွီးဆုံးတနျဖိုးအရှိဆုံး အခြိနျတဈခုပါ
*တဈခါတဈလေ အခြိနျခဏပေးပွီးလမျးထှကျလြှောကျလိုကျတာက သငျခေါငျးရှုပျနတောတှရှေငျးဖို့လိုအပျနတေဲ့နညျးလမျးတဈခုပါပဲ။
*ကိုယျ့ထကျအသကျအရှယျကွီးသူတှပွေောတာကို နားထောငျပွီးစဉျးစားခငျြ့ခြိနျတတျပါစေ။ကိုယျ့ထကျအသကျကွီးလေ သူတို့က ကိုယျတှထေကျ မြားပွားလှတဲ့ဘဝအတှအေ့ကွုံတှေ ကွုံတှပွေီ့းပွီဖွဈဖို့ ဘယျဟာက မှနျတယျ၊မှားတယျဆိုတာ ကိုယျ့ထကျပိုပွီးသိနိုငျပါတယျ။
*ကိုယျ့ကိုတကယျခဈြခငျသူတှဟော ကိုယျကရြှုံးတဲ့အခြိနျတိုငျး၊ကိုယျလဲကတြဲ့အခြိနျတိုငျး အမွဲနောကျမှာရှိနတေယျ။
*ကိုယျလိုခငျြတဲ့အရာက ဟိုးအမွငျ့ကွီးမှာရှိနရေငျတောငျဆကျသှားပါ။ဆကျလြှောကျပါ။အဆုံးသတျမှာ သငျ့ကိုယျသငျ့တောငျ ဟုတျမှဟုတျရဲ့လား အံ့သွယူရပါလိမျ့မယျ။
*ဆငျတှအေတှကျ ရအေသဈဆိုတာစမျးသပျကွညျ့ဖို့လိုသလို လူသားတှအေတှကျလညျးဘယျလိုအသဈအဆနျးမဆိုစမျးသပျကွညျ့ဖို့လိုပါတယျ။စမျးသပျပွီးမှကောငျးတယျဆိုးတယျသိမှာပါ။
ဒါတှကေတော့ ဆငျလေးတှကေိုကွညျ့ပွီး ရရှိခဲ့တဲ့ဘဝသငျခနျးစာတှပေါပဲ။
မကြာခဏဆိုသလို ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာခံစားနေရရင် ဒါစစ်ကြည့်ဖို့လိုနေပြီ